Shir ay yeesheen xubnaha Casayrland Youth Union ee somalia Iyo qaybo ka mid ah cuqaasha deegaanada Casayrland. | raascasayrmedia.com
← War Murtiyeed ka soo baxay madaxda qaranka oo ka hadlaya dhmeynta khilaafkii Barlamaanka. SAWIRRO.
2 qarax xoogan oo ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacey masaajid ku yaal Gudaha Suuqa bakaraha →
Shir ay yeesheen xubnaha Casayrland Youth Union ee somalia Iyo qaybo ka mid ah cuqaasha deegaanada Casayrland.
Shir ay yeesheen Guddiga Fulinta & Guddiyada la shaqaynaya.Shirk ay yeesheen ururka C.Y.U Bosaso, kaasoo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa hawlaha horyaala iyo sidii bulshada loo wacyigalinlahaa. Waxaa shirkaas ka soo qaybgalay xubno aad u muhiim ah oo ku jira guddiyada kala duwan ee ururka la shaqaynaya sida waxbarashada, wacyigalinta iyo Siyaasadda.
Ugu horeyn waxaa warbixin dheer soo jeediyay Guddoomiyaha Ururka Prof. C/laahi Maxamuud Siciid (Cirro) oo wax ku ool ah, sidoo kale guddoomiyuhu waxa uu sheegay in loo dhaqaaqo waddankii hadalna uusan waxba taran loona baahanyahay in bulshadaeena aynu u dhaqaaqno sidii wax loogu qabanlahaa.
Guddoomiye k/Xigeenka Ururka Maxamed Yaasiin Xuseen (Ururshe) oo hadalka lagu soo dhoweeyay ayaa intaas ku daray in loo baahanyahay dhalinyuarada iyo odayaashu inay isla shaqeeyaan waayo gacmo wada jir ayay wax kuwada gooyaan, ee waa inayno isgarab istaagnaa ururka.
Sidoo kale waxaa hadalka lagu soo dhoweeyay Xildhibaan Bile Maxamuud Yuusuf oo sheegay inuu ku farax sanyahay dowrka dhalinta maanta ay higsanayaa loona baahanyahay in garab lasiiyo lalana shaqeeyo si aynu u wada guulaysano.xildhibaanku waxa uu intaas ku daray dhalinyarada waanu la shaqaynaynaa lkn waa inaysan ka seexay hawsha ay wadaan maanta.
Hadalka waxaa qaatan Nabadoon Maxamed Qaybdiid oo isagu kamida Guddiga wacyigalinta sheegana inuu tagayo caluula kana bilaabayo olole wax ku ool ah fikradana gaarsiinayo wadankii halkaasna wacyigalin kasii bilaabayo dhakhso ee hadal looma baahna waxqabad aynu la nimaano ayuu ku soo gaba gabeeyay nabadoonku hadalkiisa.
Sidoo kale waxaa shirkii ka hadlay Nabadoon Xuseen Maxamuud Car-car oo sheegay in loo baahan yahay inaynu horumarino deegaankeena waayo isaga ayaa wax ku nahay isagayna u noqonaynaa marka waa inaynu ka fakarnaa horumarinttisa .
Waxaa kaloo halkaas ka hadlay Yaasiin Maxamed Guul oo tilmaamay in la helo nidaam rasmi ah oo loo raaco wadada horumarka si loo gaaro hadafyo cad-cad oo guul ah.
Kadib waxaa lagu soo dhoweeyay Suldaan Aw-baraa oo kamid ah Guddiga wacyigalinta oo isagu ku dheeraaday sidii dhalinyarada loo taageri lahaa loona baahanyahay inaynu taageerno dhalinteena maxaa yeelay waxay u shaqaynayaan waa inaga iyo deegaankeeni.
Sidoo kale waxaa halkaas ka hadaly C/laahi Ciise Ordaaye oo ah maamulaha Iskuulka degmada caluula ahna Guddiga waxbarashada sheegana dhibta ka jirta waxbarashada loona baahanyahay in laska kaashado sidii looga bixilahaa dhibaatada iyo jahliga dadkeena aafeeyay.
Shiikh Maxamed Axmed Shaanle ayaa ka hadlay inuu ku faraxsanyahay qaabkan horumarku ku dheehanyay loona baahanyahay in la baahiyo oo deegaanadii lagaarsiiyo si iskuduubni loo gaaro, marka waa inaynu tagnaa deeganadii inagoo si wadajira oo daacadi ku jirto u shaqaynayna waxkasta oo ay qabanayno inay si lilaahiya oo ikhlaasa.
Ugu danbayntii waxaa halkaas ku soo gaba gaboobay kulankii wax ku oolka ahaa, ayadoo halkaas lagu guddoonsiiyay dukumintiyo muhiim u ah horusocodka bulshada iyo horumarka ururka Abwaan Idiris Saalax Bari oo isagu aadaya Bareeda iyo Nabadoon Maxamed Qaybdiid oo Caluule Aadaya kuwaasoo balan qaaday inay halkaas kasii wadayaan hawlaha ururka isku xirkeeena Guud.
Afhayeenka Ururka C.Y.U
C/risaaq Jaamac Baalbaal